त्रिभुवन विमानस्थलमा ठोक्किए फेरी दुई जहाज, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
त्रिभुवन विमानस्थलमा ठोक्किए फेरी दुई जहाज, के छ अवस्था ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक पार्किङ वेमा निजी कम्पनीका दुई जहाज ठोक्किएका छन् । श्री एयरलाइन्सको जहाजले पार्किङ गरिराखेको यतिको जहाजलाई छोएको हो । श्री एयरलाइन्सका महाप्रवन्धक अनिल मानन्धरका अनुसार विराटनगरबाट आएको श्रीको जहाज पार्किङमा लैजाँदै गर्दा यतिको जहाजसँग ठोक्किएको हो । जहाजमा सामान्य क्षति भएको छ । अन्य सबै सामान्य रहेको उनले बताए । अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र दुबै कम्पनीका अधिकारीहरुले जहाजको निरीक्षण गरेका छन् ।
यस्तै नाफा कमाउन नसकेको भन्दै *नेपाल वायुसेवा निगमका दुई चिनियाँ जहाज बेच्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ५८ सिट क्षमताका मोर्डन आर्क (एमए) ६० नामका दुई जहाज बिक्री गरेर भविष्यमा हुन सक्ने थप घाटा कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। दुवै जहाज निगमले ६ वर्षअगाडि भित्र्याएको थियो।
समितिले एमए ६० जहाज छानबिनका क्रममा यसको उडान सञ्चालन निरन्तर घाटामा रहेको तथ्य फेला पारेको थियो। चिनियाँ पक्षले आवश्यक सहयोग नगरेका कारण ती दुई जहाज बेच्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहितको निर्देशन समितिले दिएको छ। समितिले १८ सिट क्षमताका वाई १२ ई नामका चारवटा जहाजका सम्बन्धमा भने कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या समाधान गराउनू भनेको छ। निर्माता कम्पनीसँग आवश्यक उडानका पार्टपुर्जा समयमा नै उपलब्ध गराउन पहल गर्नेसहितको निर्देशन सरकारलाई दिएको छ।
निगमले आव ०७३÷७४ मा चिनियाँ जहाज उडाएर १९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो भने यी जहाज उडाउन ५३ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। निगमलाई चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ घाटा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आव ०७४÷७५ मा पनि चिनियाँ जहाज उडानबाट २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि यसको कुल खर्च ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएको छ।
यसबाट निगमलाई उक्त आवमा ५७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घाटा पुगेको निगमले संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। निगमलाई चिनियाँ जहाज भित्रिएको पहिलो दुई आर्थिक वर्षमै ९१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ घाटा पुगेको थियो। आव ०७५÷७६ को वित्तीय विवरण भने प्राप्त भएको छैन। समितिले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार चिनियाँ जहाज सञ्चालनबाट निगम सुरुदेखि नै घाटामा रहेको उल्लेख छ। निगमले चिनियाँ अनुदान तथा सहुलियत दरमा खरिद गरेका ती जहाज उडानमा कुनै व्यवस्थित योजना बनाउन नसकेकाले घाटामा गएको पनि उल्लेख छ।
ती विमान पहाडी क्षेत्रमा छोटो उडान तथा अवतरण (स्टल) प्रकृतिको विमानस्थलमा उडाउन उपयुक्त भनेर भित्र्याइएको थियो। उडान गर्न निगम व्यवस्थापनको दूरदर्शी भिजन नहुनु र चीन सरकार तथा जहाज निर्माता कम्पनीले ‘सपोर्ट सर्भिस’ मा सहयोग नगरेका कारण उडान कमजोर भएको उल्लेख छ। निगमले भित्र्याएका वाई १२ सहितका चिनियाँ जहाजको समस्या समाधान गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने चीन सरकार र सम्बन्धित एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनासँग तुरुन्त आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले निगमको आवश्यकताअनुसार सेवासुविधा दिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमार्फत पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
निगमलाई यी जहाजको किस्ता तिर्न सात वर्षसम्म छुट अवधि दिएको छ। त्यसपछि २० वर्षसम्म किस्ता तिर्ने सर्त उल्लेख छ। निगमले तीन वाई १२ र एक एम ६० जहाज सहुलियत ब्याजदरमा खरिद गरेको थियो भने एक एमए ६० र एक वाई १२ अनुदानमा पाएको हो। खरिद गरिएका यस्ता जहाजको आगामी २०७७ कात्तिकदेखि किस्ता तिर्नुपर्ने सर्त छ। तर, चिनियाँ जहाज उडान सुर गरेको सात वर्षसम्म पनि निगमले यी जहाजबाट निरन्तर घाटा खाँदै आएको छ। निगमले एक एमए ६० र तीन वाई वाईका जहाज २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० आरएमबीमा खरिद गरेको हो।
यी जहाजको आगामी २०७७ कात्तिकम सान्तमा पहिलो अर्थवार्षिक किस्ता ८४ लाख १५ हजार २२५ आरएमबी बुझाउनुपर्छ। यस्तो किस्ता २०९० वैशाखसम्म बुझाउने सर्त सम्झौतामा उल्लेख छ। निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले जहाज उडानमा चिनियाँ पक्षले आवश्यक जनशक्ति तथा पार्टपुर्जा समयमै उपलब्ध नगराएको बताए। उनले भने, ‘ चिनियाँ पक्षको सहयोग नपाउँदा हामीले जहाज उडान नसकेका हौं। हामी जहाजै उडान नसक्ने होइनौं तर यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र सपोर्ट हुनुपर्छ।’
चिनियाँ पक्षको सहयोग भउमा दुवै जहाज चलाउन सकिने उनले बताए। उनले भने, ‘सरकारी निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने भएकाले निर्देशन जे आउँछ त्यसपछि मात्रै यस विषयमा भन्न सकिन्छ।’ चीनले जहाज किन्दा लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने र जनशक्ति एवम् प्राविधिक पक्षमा थप सहयोग नभएसम्म चिनियाँ जहाज उडाउन नसकिने उनले बताए। निगमका चारवटा वाई १२ मध्ये तीन वटा मात्रै उडानयोग्य छन्।
यसमा पनि जनशक्ति अभाव र आवश्यक पार्टपुर्जा उपलब्ध नहुँदा नियमित उडानमा भने दुई वटा मात्रै प्रयोगमा छन्। एउटा वाई भने ६÷७ महिनादेखि ग्राउन्डेड छ। ‘दुईवटा एमए ६० मा एउटा मात्रै उडानयोग्य छ। यो जहाज आएदेखि नै सँगसँगै मुस्किलले एक साता मात्रै उड्यो होला नत्र एउटा उड्दा अर्को ग्राउन्डेड हुने गरेको छ’, चन्दले भने। उनका अनुसार एमए ६० को एउटा जहाजको पार्टपुर्जा झिकेर अर्कोमा राखेर उडान हुँदै आएको छ।
यसैबीच नेपालकै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुदेखि नै चौबीसै घण्टा जहाज उडाउने तयारी गरिएको छ। डिसेम्बरभित्रै विमानस्थलको सम्पूर्ण मर्मतसम्भार सकिने भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले कम्पनीहरु तयार भए जनवरीदेखि नै चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको हो।
हाल विमानस्थल मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार विस्तारको काम भइरहेको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता प्रतापबाबु तिवारीले विमानस्थलमा पूर्वाधार विस्तारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। पूर्वाधार विस्तार र मर्मत सकिएसँगै चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए। ‘दुईवटा पार्किङ विस्तार हुँदै छ, काम सकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा केही थप गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘पिक आवरमा त हामीले खासै केही गर्न सक्दैनौँ तर कम चाप भएको समयमा एयरलाइन्सलाई थप आकर्षण बढाउने योजनामा छौँ।’
बुटिक एयरपोर्टका रूपमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले निर्धारित समयअगावै काम पूरा हुने जनाएको छ। हाल विमानस्थल दैनिक सात घण्टा बन्द गरेर स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। धावनमार्ग मर्मतको काम पूरा भइसकेको छ । चीनको सरकारी कम्पनी चाइना नेशनल एग्रो टेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङले चार अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लागतमा धावनमार्गको स्तरोन्नति र विमानस्थलको प्यारालल ट्याक्सी–वे, लिंक रोडलगायतको काम गरिरहेको छ। सन् २०२० को मे महिनासम्म सक्नुपर्ने काम चिनियाँ कम्पनीले २०१९ को डिसेम्बरसम्म नै सक्ने त्रिभुवन विमानस्थलले जानकारी दिएको छ।
विमानस्थलले भौतिक पूर्वाधार तयार पारे पनि रातिको समयमा एयरलाइन्सहरु जहाज उडानको लागि इच्छुक हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘राति १२ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समयमा एकदमै न्यून चाप हुने गरेको छ। अहिले मर्मतको कारण नोटाम जारी गरेको छ तर डिसेम्बरपछि यो समयमा जहाज उडाउन एयरलाइन्स कम्पनी इच्छुक हुनुपर्यो।’ त्रिभुवन विमानस्थलले एयरलाइन्सहरुलाई पत्र पठाएको तर ठोसरुपमा कुनै जवाफ नआएको उनले बताए।
नेपालमा आउने सबैभन्दा धेरै पर्यटकले हवाइ यातायातको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमार्ग एउटा मात्र भएकाले सबै पर्यटकले हवाइ यात्राको लागि अर्को विकल्प नै छैन। त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पको रुपमा हेरिएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणकै चरणमा छ। सन् २०२० को मध्यसम्ममा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी छ। भ्रमण वर्ष जनवरीदेखि नै सुरु हुने भएकाले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधारले मात्रै धान्नेमा आशंका रहेको छ।
तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने भने २० लाख पर्यटक ओसारपसार गर्नको लागि हवाइ मार्ग पर्याप्त हुने बताउँछन्। सन् २०२० मा केही जहाज गौतम बुद्ध एयरपोर्टबाट उडान हुने हुँदा पर्यटकको आवतजावतको लागि कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ। ‘डिसेम्बरसम्म त्रिभुवन विमानस्थल मर्मतको काम सकिन्छ। त्यसपछि हामीले चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्न सक्छौँ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘२० लाख पर्यटक नै त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत आउने होइनन्। सडकमार्फत पनि आउँछन्। अहिले बन्दै गरेको संरचनाले २० लाख पर्यटक धान्न सक्छ।’